Xildhibaan Cabdikariin: Jidka Muqdisho Iyo Jowhar Isku Xira Oo Aan La Mari Karin Iyo Dhaqaale Xumo Ayeey Xildhibaanno Ka Tirsan Hishabeelle U Joogan Muqdisho – Kalfadhi
Xildhibaan Cabdikariin Cali Nuur oo ka mid ah mudanayaasha Baarlamaaka Hirshaabeelle gaar ahaan guddiga dastuurka iyo dib u hishiisiinta oo u warramay warbaahinta Kalfadhi ayaa sheegay in tiro badan oo ka mid ah mudanayaasha Baarlamaanka Hirshabeelle ay sababo amni uga maqanyihiin kalfadhiga afaraad ee Baarlamaanka Hirshabeelle.
Baarlamaanka Hirshabeelle oo ka kooban 117 mudane waxaa hadda dhaarsan oo buuxiyay shuruudaha xildhibaannimada 99 mudane.
99-kaas waxaa hadda xarunta Baarlamaanka Hirshabeelle ku sugan 66 mudane, Inta kale ayaa ku sugan Muqdosho. Waxa uuna xildhibaan Cabdirakiim sheegay in mudanyaashaas aysan soo mari karin jidka isku xira Muqdisho iyo Jowhar sababo amini xumo darteed maamulkana ay ku adagtahay in uu u diro diyaarad gaar ah.
12-kii Bishaan Luulyo ayay ahayd markii la furay kalfadhigii afaraad ee Baarlamaanka Hirshabeelle, waxaana kalfadhigaan horyaalla kaliya hal hindise sharciyeed oo ah “ hidnise sharciyeedka dowladaha hoose” oo ay usoo wsaaradda arrimaha gudaha maamulka Hirshabeelle.
Xildhibaan Cabdikariim waxa uu sidoo kale sheegay in ay billaabeen “ isla xisaabtan “ kaas oo laga soo billaabo guddoomiyaha ilaa guddiyada lagu xisaabinayo in ay guteen howlihii loo igmaday.
Wasiirka qorsheynta Hirshabeelle ayuu sheegay in ayuu sheegay in ay sidoo kale su’aalo weydiiyeen intii lagu guda jiray Kalfodhigooda wali socda ee afaraad.
Wasiirrada arrimaha gudaha iyo kan amniga ayuu sheegay in sidoo kale ay baarlamaanka hor imaan doonaan todobaadka soo socda.